ကက်နက် ရဲ့ “လက်နှစ်ဘက်” Kenneth Armitage (England) 1916, Both Arms 1969-70
ခါနာ့ဂါဝါ ခရိုင်၊ ဟာ့ကိုနဲ မြို့မှာရှိတဲ့ “ပန်းပုရွာ” ဆိုတာဟာ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် လည်ပတ်စရာနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ်က ရှိရာ ဟာ့ကိုနဲ ပန်းခြံမှတ်တိုင်ကနေ The HAKONE Open-Air Museumကို ဘတ်စ်ကားနဲ. သွားခဲ့တာပါတာပါ။ ပန်းပုရွာ တည်ရှိတဲ့ ဟာ့ကိုနဲမြို့ ဟာဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥတုရာသီလေးမျိုးကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလည်းခံစားနိုင်တဲ့ သဘာဝရှုခင်းတွေနဲ့ နံမည်ကျော်ကြားသလို၊ “ပန်းပုရွာ” ထဲကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု ရတာလည်း ရင်သတ်ရှုမောစရာ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ လူသိများပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် ပန်းပု၊ အနုပညာ လက်ရာပစ္စည်းများကို လဟာပြင် ကျယ်ကျယ်ထဲမှာ ခင်းကျင်းပြသထားတာကိုက အမြင်တစ်မျိုးနဲ့ ပိုပြီး စွဲစောင်မှုရှိနေသလိုပါပဲ။ ၁၉၆၉ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ. “ပန်းပုရွာ” ဟာ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. လဟာပြင်ထဲမှာ ခင်းကျင်ပြသတဲ့၊ လဟာပြင် ပြတိုက် Open-Air Museum အမျိုးအစားထဲက ပထမဦးဆုံးသော ပြတိုက်လို့သိရပါတယ်။ သဘာဝမျက်ခင်းပြင်၊ နောက်ခံတောင်တန်း ၊ မိုးပြာရောင်းကောင်းကင် တို့ရဲ့ ပင့်မြှောက်၊ ကာရံ၊ ထွေးပိုက်ခြင်းကို ခံထားရတဲ. မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များရဲ. လက်ရာပေါင်း၁၂၀ကျော်ကို အစဉ်ထာဝရခင်းကျင်းပြသထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါတွေအပြင် “ပီကာဆို ခန်းမ” PICASSO Hall အပါအ၀င် အဆောက်အဦတွင်း ပြခန်း၅ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်နဲ့ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ဆော့ကစားနိုင်တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းများရှိရာ ခလေးများအတွက် “ပိုက်ကွန်အိမ်”ကတော့ ခလေးများအတွက် မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရအတွေ့ကြုံကို ရစေတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ အနုပညာလက်ရာပစ္စည်းများကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း အနားသို့ကပ်ခြင်း ကိုင်တွယ်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ရိုက်လာတဲ့ ဓါတ်ပုံအချို့ကို မိတ်ဆက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါအုန်းနော်။
ပန်းပုရွာအ၀င် ဗဟိုမြက်ခင်းပြင်ကို အပေါ် ပတ်လမ်းမှ တွေ့ရပုံ။
ဒီအနုပညာလက်ရာ ပန်းပုရုပ်ကတော့ လေအားနဲ့ လည်ပါတ်နေ ပါတယ်။
Nicolas Schoffer (1912-1992), Spatiodynamique (1954-1980)
နီကိုလပ်စ် ရဲ့ လက်ရာ “ဟင်းလင်းပြင် အင်အား”
သူတို့သုံးယောက်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ရှေ့ ကကော နောက်ကပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လာပါတယ်။
Francisco Zuiga(Costa Rican) 1912-, Group in Front of the Sea(1984) ဖရန်စစ်စ်ကို ရဲ့ လက်ရာ“ ပင်လယ်ကမ်းခြေက အုပ်စု”တဲ့။
Mastchinsky 1921 & Denninghoff 1923 (German), Sturm (1980)
Ryoji Goto (Japan) 1951-, Intersecting Space Construction 1978
လျောဂျိ ရဲ့ “ဆက်သွယ်ဖြတ်သန်းခြင်းရဲ့ လေဟာနယ် ဆောက်လုပ်ရေး”
Masayuki Nagare (Japa) 1923-, Wind's Impression
မာဆာ့ယုကိ ရဲ့ “လေအဟုန်ကို သိမြင်ခြင်း”
Igor Mitoraj (Pole) 1994, Tete Endormie 1983
အီဂို ရဲ့“ အိပ်ပျော်နေသေ ဦးခေါင်းရုပ်”
Santiago de Santiago Hernandez(Spanish) 1925-, Unidos
ဆန်တီဂို ရဲ့ “အပွေ့”
Giuliano Vangi ( Italian) 1931, Grande Racconto 2004 ဂွါလီနို ရဲ့ “လူပြောများတော့မယ့် ဇတ်လမ်း”
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Saturday, October 24, 2009